Miguel Almiron Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Miguel Almiron Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Nohavaozina farany teo Jolay 2, 2020
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "Miggy". Ny tantaran'i Miguel Almiron Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy ny Fiakaran'ny Miguel Almiron- Credit to Medium,ThePlayersTribune ary SkySports
Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana, ny fiainan'ny tena manokana ary ny fomba fiainany sns.
Eny, fantatry ny rehetra ny fihetsika feno fanetren-tena amin'ny fiainana, ny olona mety handratra hanidina eny an-dàlana. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny biolojia Miguel Almiron izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, ny anarany feno dia i Miguel Ángel Almirón Rejala. Almiron dia teraka tamin'ny andro 10 tamin'ny volana febroary 1994 tamin'ny reniny Sonia Almiron ary rainy, Reuben Almiron ao amin'ny renivohitra Asunción, Paraguay. Ity ambany ity ny sarin'i Sonia sy Robena, ray aman-dreniny mahafinaritra.
Miguel Almiron Ray aman-dreny- Sonia sy Reuben Almiron
Miguel Almiron TSY nobeazina tao anatin'ny fianakaviana manankarena na ambony. Ny fianakaviany dia tahaka ny ankamaroan'ny olona mahantra ao Asunción izay niasa nefa tsy nanana fanabeazana ara-bola tsara indrindra ary matetika niady tamin'ny vola.
Miguel Almirón dia nahita fa nihalehibe tao anatin'ny fianakaviana sahirana, izay niasan'ny rainy i Robo rainy, ny fiovan'ny 18 ora iray ho mpiambina ary miasa i Sonia reniny ho mpiasan'ny tranombarotra lehibe. Miguel Almiron dia nanana mpirahalahy amin'ny 5. Ireo mpikambana fito ao amin'ny ankohonany dia nitantana trano kely ary i Miguel kely kosa tsy maintsy nizara fandriana tamin'ny reniny.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny baolina kitra dia nanomboka tamin'ny maraina ho an'ny zazalahy mangina sy saro-kenatra tokoa. Satria nahantra ny ray aman-dreniny, tsy azon'i Miguel Almiron kely ny nahazo azy kilalao farany vaovao dia tsy misy afa-tsy baolina kitra taloha izay nokasihiny matetika.
Miguel Almiron dia zazalahy kely. bola: TPT
Niditra tao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany Escuela Basica i Miguel Almiron izay nilalao ny lalao baolina kitra mahafinaritra. "Mpianatra mangina be i Miguel izay manao ny entimodiny. Tsy anisan'ireo ankizy maloto izy izay kivy foana na tsy miala sasatra, "Hoy ny mpampianatra azy taloha Maria del Pilar Bernal.
Rehefa lehibe i Miguel Almiron dia lasa 7-taona, dia nanomboka nanonofy izy ny hanaovana azy lehibe. Ny faniriany lehibe indrindra dia ny hananana vola ampy hividianana trano lehibe ho an'ny fianakaviany. Tany am-piandohana, izy dia nahita ny ho avin'ny asa baolina kitra ho hany tokana ahafahany manampy ny fianakaviany miala amin'ny fahantrana. Ity mino ity dia nahita azy nametraka ny tanjany sy ny fahatapahan-kevany tamin'ny hetsika baolina kitra izay natomboka tamin'ny kianjan'ny toe-draharaha manodidina ny tampon-tanànan'i San Pablo, Asuncion.
Ny ala matevina izay nahalalan'i Miguel Almiron ny fomba hilalao baolina. Fampindram-bola amin'ny ThePlayersTribune
Ilay hazo maina sy mate misy ny mari-pankasitrahan'i Miguel ny fahaizany manala baraka no nanome azy ilay sehatra ahafahana manapa-kevitra ny hiafarany. Ny dadan'i Almiron dia nanohana ny zanany lahy tamin'ny alàlan'ny fanalany azy amin'ny zotram-pionona mba hampifaninanana azy amin'ny namana.
"Reraka be i Miguel. Tsy nanana fahatokisana izy ary afaka natahotra mora foana. ka nalaiko izy (tany amin'ny klioba) mba hanana namana hafa izy,”Hoy ​​i Ruben Almiron rainy ESPN.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Avy hatrany i Miguel Almiron dia nanomboka tsara ary nanao namana be dia be tao anatin'ny volana vitsivitsy nandao ny hazan-tany maina sy taolana teo akaikin'ny tranony. Tsy nanam-potoana firy izy raha vao nanaiky hiditra tao amin'ny Club 3 November, akademia izay ny ekipa zokiny dia nilalao tamin'ny fizarana fahatelo amin'ny baolina kitra Paraguayan. Ny akadera dia vato nariana tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany.
Ny fahafantarana ny fanirian'ny zazalahy hilalao baolina sy ny filàna miaina amin'izany, ny ankohonany rehetra, anisan'izany ny havany dia nanao izay azony natao hanohanana ny faniriany. Ity ambany ity ny fitadidiana sisa tavela tamin'ny andro nahaterahany.
Miguel Almiron Ato am-piandohana miaraka amin'ny Football- Ny fahatsiarovana sisa ny Saham-bola ho an'i TheSun
Ny ray aman-drenin'i Miguel Almiron dia niantoka ny zanak'izy ireo fa tsy nanadino ny fiofanana amin'ny baolina kitra. Ny dadatoany amin'ny anarany “Diego”Sy ny dadabeny izay mandeha amin'ny anarana hoe"Chelo”Nifandimby niaraka taminy izy rehetra mba hanao fanazaran-tena.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Road to Fame Story
Tonga ny tombontsoa raha nanohy nandroso niaraka tamin'ny fahaizany i Miguel Almiron. Tamin'ny taona 14, vonona ny handao ny klioba 3 Club i November mba hanana fotoana vaovao. Ny zatovo volon-koditra dia nasaina nangataka a fitsarana miaraka amin'i Club Nacional, klioba fandraisam-peo sy tompon-kaody sivy, ao amin'ny Diviziona Primera Paraguay.
Mampalahelo fa tsy nahomby ny fitsapana niaraka tamin'ny fikambanana. Mba tsy hahatongavan'ny zana-drahalahiny amin'ny nofiny, dia nanapa-kevitra ny handray an-tànana ny raharaha ny dadatoan'i Miguel Almeron. Nanampy azy i Diego haka toeram-pitsarana hafa miaraka amin'i Cerro Porteno. Amin'ny teniny…
"Nentinay niaraka tamin'ny reniny izy tamin'ny fitsapana izay nihaonanay zazalahy 300 izay efa niandry izany fotoana izany ihany. Tsy hohadinoiko na oviana na oviana izany satria nomerao 301 tao amin'ny ekipa i Miguel”Hoy ​​ny dadatoan'i Miguel Almeron Diego.
Nandefitra fitsapana i Miguel noho ny fahaizany. Na izany aza, mbola tsy nandeha avy hatrany izy ireo ho an'i Almiron, izay tsy nahavita hilalao ho an'ny ekipa 15 ary eo ambany sehatra 16. Voampanga ho maivana be izy, olona tsy afaka nitombo.
I Almiron indray dia voampanga ho maivana loatra. TpT
Mampalahelo fa tamin'ny Novambra 2010, rehefa nidina an-tsehatra ireo mpilalao tao amin'ny Akademia dia i Miguel izay anisan'ireo anarana ireo (tao anaty lisitra) no nidina. Ny fandrahonana hampidinin'i Miguel Almiron dia nitohy tamin'ny taona 2011 tsy misy fanantenana hahita azy hivoatra. Tamin'ny fotoana iray dia teo am-pandehanan'ny famoahana azy tamin'ny klioba izy, dia niditra tao ny mpanazatra azy taloha, Hernan Acuna, ary nanome fanavotana azy.
Hernan Acuna indray mandeha nitsangana ho an'i Almiron. Credit-TigoSports
"Nankany amin'ny mpandrindra sy ny mpanao gazety aho ary nilaza tamin'izy ireo hoe: 'Tsy tiako ny handroaka an'io zazalahy io fotsiny ny klioba satria tsotra be izy."Hoy i Acuna, ny fikambanana eo ambany mpanazatra 17.
Hernan Acuna dia ilay anjely mpiambina izay nahatonga an'i Almiron ho tapany amin'ny fisiany, nanolotra azy adidy fanaovana lalao. Izy no tompon'andraikitra tamin'ny famotsorana an'i Miguel Almiron ho an'ny ekipa voalohany amin'ny klioba.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Ho valin-kafaliana kosa i Miguel Almiron amin'ny fanampiana ny ekipany hahazo ny amboara Paraguayan Clausura ao 2013 ary ny trofiara Clausura ao 2015. Tamin'ny volana Aogositra 2015, nahatsapa i Mila Almirón fa ilaina ny hiseho amin'ny kolontsaina vaovao sy ny fomba fiofanana, noho izany dia nanapa-kevitra ny handao ny fireneny.
Almiron dia nanao sonia ho an'ny Club Atlético Lanús ao amin'ny Argentine Primera División. Tao anatin'ny vanim-potoana iray fotsiny, i Almiron dia nanampy ny klioba handresy tropy 3, dia ny- Copa Bicentenario, ny Supercopa Argentina ary ny Argentine Primera División tropy rehetra ao amin'ny 2016.
Miguel Almiron dia nahitam-pahombiazana lehibe tao amin'ny Club Atlético Lanús. Ny trosa amin'ny IG sy Picnano
Rehefa vita ireo rehetra ireo dia nandao ny firenena nankany Etazonia i Almiron izay nosoniavany ho an'ny Atlanta United FC. Fantatrao ve?… Nitohy ihany koa ny fahombiazana tany Etazonia. Miguel Almiron dia nomena anarana tao amin'ny MLS Best XI ho an'ny vanim-potoana roa ao amin'ny Major League Soccer, ary koa ny firaketana ho an'ny MLS Newcomer of the Year ho an'ny 2017. Ny fotoana lehibe indrindra teto Etazonia dia ny fanampiana ny ekipany hahazo ny amboara MLS tamin'ny 2018.
Miguel Almiron Tantaran'ny fahombiazana- Ny fivoarana tantara. Ny trosa amin'ny IG
Tamin'ny 31 Janoary 2019, i Almirón dia nanatevin-daharana ny Newcastle United tamin'ny saram-pandrindrana ao amin'ny klioba izay nandresy izany ho an'ny Michael Owen. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia nandany ny fiainana tao amin'ny faritra avaratr'i Angletera izy ary faly ny vahoakan'i Newcastle fa afaka manana mpilalao izay azon'izy ireo atao fatratra. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy lehibe rehetra dia misy toy izany koa. Ary ao ambadiky ny mpilalao rehetra mpilalao baolina kitra dia misy vady na sipa manintona hita eo amin'ny olona tsara tarehy indrindra Alexia Notto izay sendra ilay ramatoa ao ambadiky ny fiainam-pitiavan'i Miguel Almiron.
Hihaona amin'i Alexia Notto- Zazavavin'i Miguel Almiron mahafinaritra. Ny trosa amin'ny IG
Ny vehivavy sipa mainty miloko mainty an'i Miguel Almiron dia voaofana tsara ao Zumba. Ity dia programa fanatanjahantena tena be mpitia any amin'ny faritra amerika Atsimo. Alexia Notto dia nanao izany mba hahazoana vola alohan'ny nandehanany ny lehilahy tany Etazonia ary avy eo tany Eoropa.
Miguel Almiron dia namatotra ny tadiny tamin'ny sipany tamin'ny Novambra 2016, tamin'ny taona nanombohan'ny fahombiazan'ny asany. Taona ihany koa io taona io. Raha tsaraina avy amin'ny sarin'izy ireo, dia toa lanonana tsy miankina iray izay tsy nisy afa-tsy fianakaviana no nasaina.
Miguel Almiron sy sary an'ny fampakaram-bady Alexia Notto
Hatramin'ny namatoran'izy ireo ny antsy, samy nankafy ny fanambadiana tsy miankina sy tsy misy sarimihetsika ny olon-drehetra. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia mipetraka ao amin'ny Atsinanana Angletera amin'izao fotoana izao miaraka amin'i Alexia Notto manome ny fanohanana ara-pihetseham-po ho an'ny lehilahy na dia ianao aza dia midika hoe mitazona ny asany Zumba.
Miguel Almiron sy Alexia Notto mandamina tsara ny fiainana any Newcastle. Ny trosa amin'ny IG
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainam-piainan'i Miguel Almiron tsy lavitra ny lalao baolina kitra dia azo antoka fa hanampy anao hahazo azy manontolo.
Fantatrao an'i Miguel Almiron Fiainana manokana. Ny trosa amin'ny MSN
Manomboka, i Michael Almiron dia mpilalao baolina 5 ambony indrindra miaraka amin'ny fihetsika manetry tena indrindra amin'ny fiainana. Izy dia olona tsy tafiditra amin'ny ady ary tena mankatò tokoa izy.
Tahaka ny an'i N'golo Kante dia teraka izy fa saro-kenatra ary mangina, saingy amin'ny lafiny iray, mety ho hafahafa sy hafanam-po indrindra amin'ny asany mandritra ny fety. Miguel Almiron dia olona tena misaina ary manana saina ara-tsaina izay mampiasa ny sainy isaky ny misy fotoana.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Nahatanteraka ny fampanantenan'ny fividianana trano ho an'ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany i Miguel Almiron tamin'ny fotoana nifindrany tany Lanus any Argentina tany 2015, tao anatin'ny taona nanambadiany ihany koa. Tsy maintsy nividy trano tao amin'ilay faritra izay nihaonany izy, lehibe iray mba hananana efitrano ho an'ny rainy, ny reniny, ny renibeny, ny renibeny, ny dadatoany, ny rahavaviny honina.
Androany, ny karaman'izy ireo lehibe dia mikarakara ireo olona rehetra ao amin'ny fianakaviana. Nandany vola be tamin'ny fanofana sy hanome trano ho azy ireo i Miguel tany amin'ny firenena rehetra no nakan'ny baolina kitra azy.
Ireo mpianakavy Miguel Almiron dia manangona sary. Ny trosa amin'ny IG
Manampy ny reniny sy ny dadany, Deigo dadatoan'i Almiron no olona be mpiahy indrindra teo amin'ny fiainany. Diego no tompon'andraikitra tamin'ny fanampiana ny zana-drahalahiny hiatrehana ny fahaketrahana taorian'ny fahombiazany tsy nahomby tamin'ny Club Nacional
Hihaona amin'ny dadan'i Miguel Almirons- Diego
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Lifestyle
Miguel Almiron dia mpanao baolina manankarena be dia be izay miresaka pay-check. Indray mandeha, nitazona ny rakitsoratra mpilalao X -UMX farany ambony indrindra ao amin'ny tantaran'ny Major Soccer League (MLS) izy. Ho an'ny olona iray izay nanao $ 12 isaky ny tanjona noforonina sy nitazona ny sandan'ny tsena $ 209,000 tapitrisa, dia tokony hiaina fiainana mamirapiratra araka ny hita eto ambany.
Fahatakarana ny fomba fiaina Miguel Almiron Ny trosa Telegraph
Tsy izany anefa no zava-misy. Miaina fiainam-panetren-tena i Miguel Almiron ary mahay mandamina ny volany.
Miguel Almiron Tantara Fahazazana Ankizy Miampy Loold Biography Untold - Untold Facts
Ilay mpilalao tiany indrindra amin'ny fotoana rehetra dia mijanona ho mpiambina hatrany:
Tonga dia namaly haingana i Miguel Almiron rehefa nanontany hoe iza no mpilalao tena nankafiziny tamin'ny tantaran'ny baolina kitra. Amin'ny fahalalany ny baolina kitra dia misy ny sampy iray. Tsy olon-kafa afa-tsy ilay mpiady mpiady Paragiuan mpamantatra Chilavert izay foiben'ny ekipa nasionaly nandritra ny 1990.
Hihaona amin'i José Luis Chilavert- Idola an'i Michael Almiron. Ny trosa FoxSports.
Fantatrao ve! I Chilavert no hany mpiandry ny tantara teo amin'ny tantara izay matetika nitondra koka sy sazy maimaim-poana, ka nahatonga azy ho mpiandry pankafy indrindra faharoa isaky ny mandeha.
Manao ahoana ny CV-ny amin'ny fotoana nanoratana: Raha jerena ny fanangonany ny fanomezam-boninahitra an'ny tsirairay sy ny klioba dia azonao fantarina tsara ny antony nanapahany Newcastle United fa handoa vola mihoatra noho izay taloha mba hividianana an'i Michael Owen hividianana an'i Michael Almiron.
Miguel Almiron tsirairay ary manome voninahitra ny klioba
Raha araky ny voalaza etsy ambony dia nanana zavatra hatolotra ny mpampiasa azy i Miguel Almiron isaky ny vanim-potoana, manomboka amin'ny 2016.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny anay Miguel Almiron Tantara an-tsary momba ny tantaram-piainana tsy hita isa. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Salomon Rondon tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Raul Jimenez Tantara momba ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra
Javier Hernandez ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Antonio Valencia Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra
Arturo Vidal tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
David Luiz tantara an-tsarimihetsika malaza momba ny tantaram-pahaterahana malaza tsy fantatra
Alexis Sanchez tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Thiago Silva Tantara Momba Ny Tantaram-pitiavana Ataon'ny Tombokely Mihamitombo
Tantaran'i Alfredo Morelos Childhood Tantara miampy ny Untold Biography Facts
James Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa